Kuisa pamberi penharembozha yako kana yewebhu maficha zvichienderana nevashandisi vako - NewGenApps
Kukudziridzwa kweApp, Product development, Kutanga kubvunza, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Kuisa pamberi peyako nharembozha kana webhu maficha maitiro zvinoenderana nevashandisi vako
Kukudziridza a yakabudirira nharembozha/ sevhisi harisi basa riri nyore - rinoda kunyatsogadzirira, kuronga uye kuita. Uye chimwe chikamu chakakosha che famba kuvandudza kweApp iri kutsanangura maficha anozopihwa neapp yako. Seye mupi weapp, zvirinani, iwe ungangoda yako app kuti ive neese maficha ane chekuita nemhando yacho. Asi izvo zvakare zvinoreva kuti yakakwira nguva yekushambadzira, chirongwa chakaomarara uye kurasikirwa neyekutanga-mover mukana. Ichi chikonzero nei zvichikosha kuisa pamberi izvo zvinhu zvaunofanira kushandira pakutanga muapp uye izvo zvinogona kuuya mumashure.
Nzira yekuzivisa iyo famba app maficha ekutanga kuita anowanzo zvinoenderana nemunhu wechigadzirwa chako. A persona inotsanangurwa seyakakosha mushandisi chikamu chechigadzirwa chako. Usavhiringe vanhu nezvikamu zvevatengi asi - vanhu vanotorwa nekudzika zvakanyanya muzvinodiwa. Iwo akakosha mukugadzira maficha echigadzirwa chako, zvichiita kuti chiwedzere kubatsira uye chakakodzera kune vako yekupedzisira vashandisi.
Kune akawanda maturusi anowanikwa ayo anokubatsira kuti uone ako manas - haina kuganhurirwa kune yakatsanangurwa maitiro uye chimwe nechimwe chigadzirwa chingave nezvayo zvimiro. Nekudaro, chinhu chimwe ndechechokwadi - kana iwe uchipfuura nepese paungagone manas pachigadzirwa chako, pamwe nekukwira kwenhamba yemunhu yeapp yako, zvinowedzera kuoma kuona kuti maficha matsva anofanirwa kukodzera sei pasina kuregeredza mamwe.
Pakutanga kuona, kuzivisa makiyi ekushandisa emunhu eapp yako angaite kunge ari nyore. Asi sezvaunopinda mune iyo ruzivo, zvinogona kunge zvisiri nyore. Pane zvishandiso zviripo zvinogona kukubatsira iwe kuziva izvi.
Ngatitii tinotora muenzaniso weapp yekuti wega mudzidzisi wekubatana nevatengi vavo. Iwe unogona kufunga kuti iwo manas anosanganisira vatengi vacho. Asi kana iwe ukanyura mukati mazvo, panogona kuve neatatu manas
Vanhu vanonyorera kumasevhisi avo asi vanorasikirwa nechido
Vanhu vanoisa mukushingirira asi chete kusvika padanho - havana hanya nekushanda kunze asi havazodya zvakanaka uye vanofarira kugovana kufambira mberi kwavo
Vanhu vanotora kuraira kwavo zvakanyanya - kushanda kunze, kudya chaiko
Zvichienderana neaya manas, iwe ungade kuunza maficha ekuverenga macalorie, kuita kwekuita kwekuteedzera, stats kuteedzera uye kunyangwe evanhu vezvenhau kugovana. Asi unoisa sei pamberi izvo izvo zviripo nehuwandu hushoma hwekubaya (kunyanya yekutanga skrini kana mushandisi apinda muapp)?
Ndiko kunosvika matanho ari pazasi
Danho rokutanga nderekuti unganidza data uye uronge. Dhata inogona kutorwa kubva kubvunzurudzo, bvunzo dzeA / B uye dzimwe nzira. Ronga iyi data zvirinani uchishandisa mepu dzepfungwa uye gadzira hukama pakati pezvinhu zvechigadzirwa uye manas. Tsanangura maitiro avo, zvavanofarira, zvehunyanzvi zvido nezvimwe uye nekuzvipwanya kuita tsananguro dzakarurama.
2. Kuisa manas
Nhanho inotevera ndeye kupa huremu kune iwo manas zvichienderana nekutarisa kwako kubva padanho 1. Izvi zvinosanganisira kupa kukosha kwakakosha kune wega munhu zvichienderana nehukama hwavo kune chako chigadzirwa. Funga nezvese zvinhu zvinozotsanangudza zvavanofarira zvinozadziswa neapp uye kuti vangangoshandisa sei. Yakakwirira mukana wekushandisa iyo app, kuwedzera kwavo huremu.
3. Chinzvimbo chezviitiko
Tevere iwe unofanirwa kurodha runyorwa rwezvinhu iwe zvawakaona. Gadzira gridhi yezvinhu uye uzviise zvinoenderana nekukosha kwazvo kune wega munhu. Kana chimwe chinhu chakanyanyoenderana nemunhu ane huremu hwepamusoro, chinowedzera huremu. Nenzira iyi, unogona kuona maficha akakodzera kune hombe nhamba yemunhu.
Tora semuenzaniso grid rinotevera rezvimiro A, B, C uye D yakatarisana nevanhu vatatu P, Q naR. Idzo nhamba dziri pano dzinoratidza marongero angaita zvinhu zveumwe neumwe.
Tevere, isu tinowedzera huremu hwechinhu chimwe nechimwe nehuremu hwemunhu. Mumuenzaniso uyu, D inova inonyanya kukosha.
4. Kushandisa zviyero pamatanho ebudiriro
Zvino, neruzivo rwekuti chimiro chega chega uye wega munhu anoenderana nezvechirongwa chako, unogona kushandisa zviyero izvi nekuzvishandisa kuburikidza nezvikamu zvese zveprojekti - kubva kuUI, UX kusvika iko chaiko kuitiswa. Kuve wakashongedzwa neruzivo urwu kunokubatsira iwe kuita sarudzo dzakasarudzika pazvinhu izvo vashandisi vako vari kutarisira zvikuru kwazviri.
Kana zvasvika kune personas, vazhinji varidzi vezvigadzirwa vanongozvifunga ivo kana vachitsanangura zvinodiwa neprojekiti. Asi kana vakashandiswa padanho rega rega kubva pakubata pamuviri, kusvika patani, kushanda mukati mese chigadzirwa chinobudirira, inogona kutungamira kunobatsira kugadzira chigadzirwa chakabudirira.
Maitiro atatsanangura pano anoshanduka uye anofanirwa kuchinjika zvichienderana nechigadzirwa chako uye nezvinangwa zvekupedzisira. Asi isu tinovimba iyi posvo inokupa nzira yekumberi.
NewGenApps yanga ichibatsira vanhu uye startups kuunza mazano avo kuhupenyu uye yakabatsira mukubatsira kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye maapplication. Kana uchida chero rubatsiro enda mberi newako famba/web app, bata kubata.
8 Kushambadzira Maitiro muMumhanzi Kutanga Nzvimbo
Jan 27 | Kutanga kubvunza